Baro magaalooyinka ugu fiican xeebta Burtuqiiska | Bezzia
Tuulooyin qurux badan oo ku yaal xeebta Bortuqiiska
Susana Garcia | 19/05/2021 10:00 | nololeedka, safarka
Boortaqiiska waa wadan soojiidasho badan, oo leh dhaqammo cajaa'ib leh iyo kilomitir badan oo xeeb ah oo ka dhigaya mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee xagaaga lagu qaato. Waxaa jira aagag xeebeed oo caan ah, sida kan Algarve, laakiin wax badan ayey haysaa in la ogaado, sida xeebta waqooyi ee magaalooyinkeeda oo la mid ah kuwa Galicia ama aagga dhexe, halkaas oo aan horayba ugu aragnay dalxiis caan ah. meelaha.
Waan arki doonaa qaar ka mid ah magaalooyinka soo jiidashada leh ee aan booqan karno haddaan ku safrayno xeebta Bortuqiiska. Xeebtan wax badan ayaa laga arkaa oo wadista baabuur wadashaqaynta waa fikrad aad u fiican. Waa mid ka mid ah safarada ugu fiican ee lagu sameyn karo Bortuqiiska.
Viana do Castelo waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee lagu booqdo xeebta woqooyi ee Bortuqiiska. Magaaladaan yar waxay leedahay xeeb laakiin sidoo kale waxay leedahay meelo badan oo la arko. Dusha sare ee a buurta waxaan arki karnaa kaniisada Santa Luzia, dhisme gaar ah oo leh qorshe laba jibbaaran oo leh aragtiyo qurux badan oo ku saabsan badda iyo magaalada. Markaad magaalada gasho, waxaad aadi kartaa dekedda si aad u aragto markabka Gil Eanes, oo ah markab isbitaal duug ah oo aad ku arki karto qalabka guryaha ee ay adeegsadeen. In Viana do Castelo waxaan sidoo kale booqan karnaa matxafka shukulaatada.
Magaaladan yari waxay ku taalaa degmada Porto horena waxay u ahayd goob loogu talagalay kaluumeysiga. Magaalada waxaan ku arki karnaa mid ka mid ah qalcadaha woqooyi ee caadiga ah, oo loo yaqaan sida qalcaddii Nossa Senhora de Conceiçao. Mid ka mid ah qodobbada la arki karo waa Iglesia da Lapa, yar laakiin aad u soo jiidasho leh. Meesha u dhow qalcadda waxaan ku aragnaa taalo loo xusuusto haweeneyda kalluumeysatada ah. Maanta magaaladani waxay leedahay dalxiis badan oo ay ugu mahadcelinayaan xeebaheeda.
Tirada dadka Aveiro waa oo loo yaqaan 'Portuguese Venice' kanaalladeeda, oo waagii hore loo adeegsan jiray ganacsiga. Moliceiros waa doonyo midabbo badan leh oo maalmahan ay ku raaxaystaan ​​dalxiisayaasha iyaga oo dhex maraya kanaallada. Magaalada waxay leedahay wajiyo qurux badan. Waxaan sidoo kale arki karnaa Matxafka Aveiro oo ku yaal Kaniisadda Ciise iyo Catedral da Sé de Aveiro. Aaggan waa inaadan seegin xeebaha Costa Nova iyo Barra beach.
Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan xeebta Bortuqiiska. Figueira da Foz waxay leedahay xeebo qurux badan oo ballaadhan sida praia da Caridade. Meeshan waxaan sidoo kale ku arki karnaa xoogaa qalcado ah sida Buarcos iyo Santa Catarina. Magaalada gudaheeda waxaa ku yaal Qasriga Duqa Magaalada Sotto, qaabka Faransiiska iyo jardiinooyin qurux badan. Kasiinada waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee soo jiita dalxiisayaal badan.
Tani waa villa kale oo soo jiidasho leh oo mudan in la booqdo. Suuqa degmada waxaan ka arki karnaa noocyada kala duwan ee cuntada iyo jardiinada Visconde da luz waa meel lagu lugeeyo bartamaha magaalada. Ku socod iyo xeebo da Rainha ama da Ribeira waa qodobada ugu xiisaha badan. Sidoo kale waa inaan ku lumaa magaaladeedii hore oo aan aragnaa, tusaale ahaan, Seixas Palace ama qalcaddii hore.
La Dadweynaha Lagos waxay ku yaalliin aagga Algarve, koonfurta Bortuqiiska. Tani waa mid ka mid ah meelaha dalxiiska ugu badan ee Boortaqiiska. Dhagxaanta Ponta da Piedade waa kuwo aad u qurux badan waana meel dabiici ah oo ay tahay in la arko. Aaggan waxaa sidoo kale ku yaal Meia Praia, oo ka mid ah xeebaheeda ugu waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Tuulooyin qurux badan oo ku yaal xeebta Bortuqiiska
Tabaha si loo helo tan caafimaad qab
Sida loo helo caafimaad wanaagsan oo cagaha ah